Bankiga dhexe ee Somalia oo bilaabay nidaam cusub oo shaqaalaha dowlada lagu siinayo Mushaharka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Bankiga dhexe ee Somalia oo bilaabay nidaam cusub oo shaqaalaha dowlada lagu siinayo Mushaharka
Bankiga dhexe ee Somalia ayaa bilaabay nidaam cusub oo mushaharka lagu siinayo shaqaalaha ka howlgala wasaaradaha iyo xafiisyada kale dowlada.
Shaqaalaha dowlada ayaa markii hore mushaharka marka ay qaadanayaan u geli jiray safaf dhaadheer oo dhibaato badan ay ku qabeen, iyagoo maalintii oo dhan qoraxda taagnaan jiray ayna u dheereyd khatar la xiriirta dhinaca amaanka.
Sidoo kale xarunta Bankiga dhexe ayaa maalmaha mushaharka la bixinayo waxaa laga dareemi jiray buuq iyo saxmad badan oo shaqaalaha bankiga iyo ciidamada amaanku ay dhibaato badan kala kulmayeen.
Haddaba bankiga dhexe oo ka duulaya dhibaatooyinkaas ayaa shaqaalaha dowlada ku wargeliyey iney Accountiyo ka furtaan bankiyada gaarka leeyahay ee ka howlgala dalka sida Dahabshiil, Salaam Bank iyo qaar kale si mushaharkooda ay halkaas ugala baxaan iyagoo aan saf gelin xarunta bankigana imaanin.
Shaqaalaha dowlada ayaa dhowaan nidaamkan mushaharkii ugu horeeyey ku qaatay, waxaana loogu diray accuonada ay bankiyada ka furteen halkaasoo ay kala baxeen lacagahooda.
Nidaamkan ayaa caan ah dalalka caalamka balse ku cusub Somalia, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha dowlada oo arintan wax laga weydiiyey ayaa soo dhoweeyey waxayna sheegeen iney ka nasteen safafkii qoraxda iyo silicii ay ka mari jiri maalinta ay mushaharkooda doonanayaan.
Guddigii Dowaladda ay u saartay baaritaanka raashiinkii WFP ee lagu qabay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo war-bixin soo saaray